ताजा तरकारी भन्दा बासी तरकारीमा बिषादीको मात्रा कम - ज्ञानविज्ञान
ताजा हरियो तरकारीको माग मात्र होइन, मूल्य पनि बढी हुन्छ । जति महँगो परे पनि ताजा नै किन्ने र तत्काल पकाइहाल्ने आम उपभोक्ताको बानी छ । तर, त्यस्ता ताजा र चिल्लो देखिएका तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
घाममा सुकाउन नमिल्ने सागलगायत तरकारीलाई भने केही समय पानीमा डुबाउने र तीन–चारपटक पखालेर मात्र पकाउँदा असर नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । वर्षातको समय तरकारीमा किरा बढी लाग्ने हुँदा किसानले विषादीको प्रयोग बढी मात्रामा गर्ने उहाँको भनाइ छ।
तरकारीमा विषादीको जथाभावी प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा ल्याब म्यानेजर कृष्ण राईले बताउनुभयो । ‘विषादीको होल्डिङ पिरियड हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनपछि पकाउँदा विष कम हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार किसानलाई विषादी प्रयोगबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि समस्या बढेको छ। ‘उनीहरूले आफ्नो मात्र फाइदा हेर्छन्। अघिल्लो दिन बेलुका विषादी हालेर भोलिपल्टै तरकारी बजार लाने समस्या पनि छ,’ राईले भन्नुभयो ।
चिल्ला र ताजा तरकारीमा भन्दा फुस्रा, किरा लागेका र बासी तरकारीमा विषादी कम हुने खाद्य प्रविधिविज्ञ जीवनप्रभा लामा बताउँउनुहुन्छ। बजारमा बेचिने सबै तरकारीको परीक्षण सम्भव नभएकाले तरकारी किन्दा चिल्ला र ताजाभन्दा फुस्रा, ओइलिएका तरकारी किन्दा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित हुने खाद्य विज्ञहरूको भनाइ छ।
व्यावसायिक तरकारी किसानले तरकारी तथा फलफूलमा लाग्ने किरा मार्न मात्र होइन बढी उत्पादन र चिल्लो र ताजा देखाउनसमेत विषादी र रसायनको प्रयोग गर्ने गर्छन्। ‘किसानको बारीबाट उपभोक्ताको चुलोसम्म पुग्न दुईदेखि तीन दिन लाग्छ। त्यतिबेलासम्म चिल्ला र ताजै हुनु भनेको तरकारीमा विषादीबाहेक चम्काउन प्रयोग गरिने रसायनको पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ,’‘त्यस्तो रसायनले जनस्वास्थयमा प्रतिकूल असर गर्छ।’
हरियो तरकारी, फलफूल तथा सलाद ताजै रहोस् भनेर फ्रिजमा राख्ने प्रचलन बढ्दो छ। तर, त्यसरी फ्रिजमा राख्दा ब्याक्टेरिया नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि विषादी जस्ताको त्यस्तै बस्ने बाली संरक्षण निर्देशनालयअन्तर्गतको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ कालिमाटीका मानबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो।
तरकारीलाई फ्रिजमा नराखी घाममा सुकाउँदा विषादी छिटै उड्ने उहाँको भनाइ छ। तर, घाममा सुकाउन नमिल्ने सागलगायत तरकारीलाई भने नुनपानीमा कम्तीमा आधा घन्टा डुबाउँदा विषादीको असर कम हुने उहाँले बताउनुभयो।
गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो बेला बढी तारेको या मसालायुक्त खाना धेरै खानुहुँदैंन । फुड प्वाइजनको समस्या हुने पनि यही मौसममा हो । त्यसैले यो मौसममा हल्का या सजिलै पच्ने खालको खाना खानुपर्छ । गर्मीमा यी तरकारी खानु उपयोगी मानिन्छ ।
गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ । यो समयमा धेरै मानिसलाई अत्याधिक पसिना आउने गर्दछ साथै काखी गन्हाउने समस्या हुने गर्दछ । यो समस्याले गर्दा कतिपयलाई सार्वजानिक स्थल र कार्यलयमा बस्दा समेत ठुलो समस्या हुने गर्दछ । तर, काखी गन्हाउँछ भन्दैमा नआत्तिनुहोस् । किनकी यसका समाधान पनि छन् । काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्न यस्ता खाले घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
काखीमा पसिना आएपछि ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुन्छन् र त्यसको दुर्गन्ध शरिरभर फैलिएर समग्रमा शरिर नै गन्हाउँछ । हाम्रो शरिरको कुनै पनि अंगमा आउने पसिनालाई रोक्न सकिँदैन किनकी पसिना आउनु पनि एउटा नियमितता हो । तर यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट बच्न गर्मी मौसममा कम्तिमा दिनमा एकपल्ट नुहाउने गर्नुपर्छ । विशेगरी एन्टिब्याक्टेरिया साबुनको प्रयोग गर्नुपर्छ । हावा छिर्ने प्राय कटन र फाईबरका लुगा लगाउनुपर्छ । पसिना नसोस्ने तथा छालामा पनि अशर गर्ने भएकोले गर्मी मौसममा सिन्थेटिक्सयुक्त कपडा लगाउनुपर्छ ।
खाना खाँदा बिचार पुर्याउँ
गर्मी मौसममा कफीको मात्रा, जंक फुड र तेलीय खानेकुरा घटाउनै पर्छ । यी खानेकुरा विशेषगरी क्याफिनले पसिना ग्रन्थीलाई उत्तेजित बनाउँछ जसका कारण शरिरमा अत्यधिक पसिना आउने र गन्हाउने गर्छ । मौसमी फलफुल र प्रर्याप्त पानी पिउदा पनि पसिना गन्हाउने समस्याबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
काखीमा कागतीको रस लगाउनुस
कागतीको रस दल्नु सबैभन्दा उपर्युक्त घरेलु तरिका हो । यसबाट कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । आधा टुक्रा काटेको कागती काखीमा निचोरेर दल्ने र यसलाई केही समय सुक्न दिएर लुगा लगाउनुपर्छ । यसको केहीबेर पछि चिसो पानीले नुहाउनुपर्छ । यसले शरिरबाट आउने पसिनायुक्त गन्धबाट मुक्त गर्नुका साथै लामो समयसम्म ताजा राख्छ ।
तुलसी र निम दुबैमा ब्याक्टेरिया बिरोधी तत्वहरु हुन्छन् । यसले ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुनबाट बचाउँछ । तुलसी र निमको पातको लेपन बनाएर काखी वा शरिरको पसिन आउने अन्य भागमा लगाउनुपर्छ । केही समय रहन दिएर धुने वा नुहाउने गर्नुपर्छ । सातामा तीन पटक यस्तो लेपन लगाउँदा उत्तम हुन्छ । नुहाउनु भन्दा अगाडि यो लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।
एसिड भएको समयमा छालाको ब्याक्टेरिया बाँच्न सक्दैन । तसर्थ स्याउको वाइन, भिनेगार, चियाको तेल र विच हेजल लगाउँदा पनि शरिरको दुर्गन्ध हट्छ । स्याउको वाइन, भिनेगर र विच हेजललाई पाखुरामुनि दल्ने गर्नुपर्छ ।
अब गर्मी बढे सँगसँगै राेगहरू पनि बढ्छ, गर्मीयाममा लाग्ने रोगबारे जानी राखौं !
दूषित पानी र बासी, सडेगलेको खानाले झाडापखाला लाग्छ । विशेषगरी गर्मी समयमा यसका ब्याक्टेरिया सक्रिय हुन थाल्छन् । तर, चिसो मौसम नै भएको भान पर्न गई जथाभावी पानी पिउँदा तथा बासी तथा सडेगलेको खाँदा झाडापखालाले सताउने गर्छ ।
गर्मी मौसम बढे संगै सबैभन्दा बढी झाडापखालाका बिरामी आउने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए । झाडापखालाले मानिसलाई जलवियोजन गराई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
यदि खानेकुरामा ध्यान नदिने हो भने आउँ पर्नेसम्मको समस्या उत्पन्न हुन्छ । ‘अहिलेसम्मको रिपार्ट हेर्दा जाडोबाट गर्मी सुरु हुने समयमा झाडापखालाका बिरामी बढी आएको पाएका छाँै ।’ उनले भने ‘त्यसका साथै आउँको समस्या पनि देखिएको छ ।
धेरै तिर्खा लाग्ने,
आँखा गढेको देखिने पेटको छाला तानेर हेर्दा हतपत नफर्किने
बच्चाले झोल पदार्थ पिउनमा समस्या
बच्चा बेहोससम्म हुन सक्ने
दुई हप्ताभन्दा लामो समयसम्म झाडापखाला लागेमा त्यसलाई दीर्घ झाडापखाला (क्रोनिक डायरिया) भनिन्छ । त्यसमा चिकित्सकको सल्लाह लिएर औषधि खुवाउनुपर्छ ।
हेपाटाइटिस ए र ई (जन्डिस)
जाडो महिना सकिएर गर्मी सुरु हुँदा देखिने अर्को रोग भनेको हेपाटाइटिस ए र ईको समस्या हो । ए प्रत्येक वर्ष देखिइरहन्छ भने हेपाटाइटिस ई पनि केही वर्षको अन्तरमा स्थान विशेषमा देखिने गरेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । यी दुवै हेपाटाइटिसका कारण जन्डिस हुन सक्छ ।
जन्डिसले कलेजोलाई असर पार्छ । गर्भवती महिलालाई जन्डिस भएमा सबैभन्दा बढी खतरा मानिन्छ । कलेजो रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. अनिल मिश्रका अनुसार शरीरमा हुने पहेँलोपनको मात्रा बढ्नु नै जन्डिस हो । पहेँलोपना बढ्ने कलेजोभित्र र कलेजोबाहिर लाग्ने रोगले गर्दा हो ।
कलेजोबाहिर पित्तको नलीमा केही खराबी भयो भने त्यो बाहिरको जन्डिस हो । त्यसलाई सर्जिकल जन्डिस भनिन्छ । कलेजोभित्र हुने जन्डिसलाई मेडिकल जन्डिस भनिन्छ । दूषित पानी सेवनका कारण जन्डिस लाग्ने मिश्र बताउँछन् ।
हेपाटाइटिस ए र ई (जन्डिस) लक्षण
शरीर पहँलो हुँदै जाने,
खान मन नलाग्ने,
दायाँ कोखा भारी हुँदै जानेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
दूषित पानी र खानपानमा हुने असरका कारण देखिने अर्को रोग भनेको टाइफाइड हो । जहाँ पायो त्यहाँको पानी नउमाली पिउने, सहरका गल्लीमा बनाइएका खाना जथाभावी खाने र सफा पानीले नपखाली फलफूल खाने गर्दा टाइफाइडको सम्भावना धबढी हुन्छ ।
असुरक्षित खाना र फोहोर पानीमा पाइने सालमोनेलाटाइफी ब्याक्टेरियाका कारण टाइफाइड लाग्छ । आन्द्रामा ज्वरो आउने समस्याका कारण टाइफाइड हुने हुँदा यसलाई ‘आन्द्राबाट आउने ज्वरो’ पनि भनिन्छ ।
दुई हप्ता कटेपछि कलेजो, फियो बढ्ने कडा खालको टाइफाइड भएर लामो समयसम्म रहेमा आन्द्रालाई प्वाल पार्ने सम्भावना रहन्छ ।
Don't Miss it तपाईको बढी दुध पिउने बानी छ कि दहि ? स्वास्थ्यका लागी कुन बढी फाइदाजनक ? थाहापाउनुहोस्
Up Next दैनिक दिसा लाग्दैन ? अब नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय !
पेस्ता मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने फल लाग्ने वनस्पति हो । स्वादिलो परिकार तयार पार्न पेस्ताको प्रयोगलाई प्रमुख स्वादका रुपमा सेफहरुले…
बन्दागोभीले स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै बिभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ । त्यसैले…
अन्डालाइ यसरी खानु बढी स्वास्थ्यकर मानिन्छ, जान्नुहाेस्
पछिल्ला केही वर्ष यता नेपाली भान्सामा पनि अन्डा लगभग दैनिक पाक्ने गरेको छ । ब्रेकफास्टमा त अन्डा नछुटाउने धेरै भइसकेका…
आलुको बोक्रालाई यति गरे असाध्यै फाइदा गर्छ स्वास्थ्यमा, के तपाईलाई थाहा छ ?
आलुमा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक धेरै पौष्टिक तत्वहरू हुन्छन् । हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार, आलुमा केहीयस्ता भिटामीन पाइन्छ, जुन…
मुलाकाे सेवनले याे राेगबाट बच्न सकिन्छ, जान्नुहाेस्
नेपाली भान्सामा प्रायः नटुट्ने मुला पाइल्स रोग निको पार्ने उत्तम औषधि हो । मुला नियममित खानाले पाइल्स रोग एक महिनामै…
खेलाँची गरे भयानक समस्या बन्न सक्छ पेटको अल्सर, पढेपछि सक्दाे सेयर गर्नुहाेला
पेटको अल्सर भन्नासाथ हामी झस्किन्छौं । यो पिडादायक हुनुका साथै जटिल पनि हुन्छ । त्यसैले, यो समस्या थाहा पाउनासाथ उपचार…
दाद, जण्डिस देखि लिएर अन्य थुप्रै राेगहरु चट पार्ने हर्रोका औषधीय गुणहरु यस्ता छन्
आयुर्वेदिक औषधीय पद्दतिमा प्रयोग गरिने त्रिफला तयार गर्नमा प्रयोगमा आउने तीनवटा (हर्रो, वर्रो र अमला) मध्येको यो एउटा फल हो…
कोदो खादाको फाइदाहरु
कोदो विश्वको एक प्रमुख अन्न बाली हो। यसको रोटी, ढिंडो लगायतका परिकार बनाइन्छ । कोदोबाट जाँड, रक्सी पनि बनाइन्छ ।…
यसरी बढ्ने गर्मीबाट कसरी राहत पाउने ? कुलर ठिक कि एसी ?
केही दिनको झरी थापिमएसँगै वायुमण्डलमा तातो हावा चल्न थालेको छ । घामको राप थप चर्को बन्दैछ । तराई लगायतका क्षेत्रको…
१. चम्किलो प्रकाश र भीडभाडबाट टाढै रहने । २. अति दुर्गन्ध तथा बास्ना आउने ठाउँ नजिक नजाने । ३. भोको…
के तपाई अफिस समयमा आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ताे काइदा
लामो जीवन जीउन चाहनुहुन्छ र रोगबाट टाँढा रहन चाहनुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु निकै आवश्यक हुन्छ । व्यस्त जीवनशैलीका कारण…
खोर्सानी खादा हुने अनेक फाईदा र बेफाइदाहरु
खोर्सानीलाइ हामि विभिन्न परिकार लगायत अचार पनि बनाएर खान्छौ। यसको प्रयोग सबैले आफ्नो स्वाद अनुसार गर्छौ । प्राय हामि स्वादको…